Abuu Dar Al Qhifaari – Wajibad
Abuu Dar Al Qhifaari
Abuu Darr Al-Qhifaari
Waa Saxaabiga Soo Islaamiyay Tolkiisa oo Idil…!
Wuxuu u hanqal-taagayay inuu soo baxo Nebi cusub oo buuxiya dadka laabtooda, isla markaasna ka saara dadka mugdiyada iyo baadida ay ku sugan yihiin, una saara iftiinka iyo nuurka xaqa ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa maalintii danbe Abuu Dar soo gaaray –isagoo ku sugan miyiga- wararka sheegaya Nebiga cusub ee ka soo bixi doona magaallada Makka.
Abuu Dar oo doonaya inuu ka sal gaaro warkaas ayaa wuxuu ku yiri walaalkiis Aniis hadalladan “Aniisow waxaad u kicitintaa Makka, oo waxaad is-dul-is-taagtaa wararka sheegaya ninka lagu sheegay inuu yahay Nebi, oo xagga samadana looga waxyoonayo. Hadalladiisa bal noo soo dhageyso, dabadeedna iila imoow wuxuu sheegayo”.
Sahankii uu Ugu Jiray
Diinta Xaqa Ah
Cali oo Marti Geliyay
Cali wuxuu Abuu Dar ka ballan qaaday inuu fulin doono ballantii uu la galay isaga. Abuu Dar wuxuu yiri “waxaanMakka uga imid meel aad u fog, dantayduna waa sidii aan ula kulmi lahaa Nebiga cusub iyo inaan dhageysto hadalladiisa”. Farxad awgeed waxaa fur-furantay wejigii Cali Binu Abii Daalib, wuxuuna ku yiri:
Abuu Dar “wallaahi ninkaad sheegtay waa Rasuulkii Alle ee xaqa ahaa”, wuxuuna intaa u raaciyay “markii la gaaro subixii anniga ayaad i soo raacaysaa, haddaan arko wax aan kaaga cabsanayo waxaan u istaagayaa sida annigoo la moodo inaan daadinayo biyo oo kale, haddaan sii wato socodkana i soo raac jeer aad ka gashid meesha aan galo”.
Abuu Dar labo indhood isuma keenin habeenkaas, hilowga daran uu u qabo la kulanka Nebiga cusub awgeed. Subixii markii la gaaray, waxay Cali iyo Abuu Dar yimaadeen gurigii Nebiga (scw). Markii uu yimid Abuu Dar wuxuu ku salaamay Rasuulka (scw) salaantii ay carabta isku salaami jireen ee ahayd “cimta sabaaxan” ama “subax wanaagsan”, hase ahaatee Rasuulka (scw) ayaa u sharxay inay muslimiinta isku salaamaan salaan ka duwan taas.
Riwaayad kale ayaa sheegaysa inuu Abuu Dar ku salaamay Rasuulka (scw) salaanta islaamka, sidaa darteed ayaa loo yiraahdaa wuxuu Abuu Dar ahaa qofkii ugu horeeyay ee ku salaama Rasuulka (scw) salaanta islaamka, dabadeedna sidaas ayeey ugu dhex shaacday muslimiinta.
Abuu Dar Ilaah ha ka raalli noqdee wuxuu yiri: Wixii intaa ka danbeeyay waxaan magaallada Makka la joogay Rasuulka (scw). Wuxuu i baray guud ahaan aqoonta la xiriira diinta islaamka, wuxuu igu aqriyay qaar ka mid ah qur’aanka, kadibna wuxuu igu yiri “inaad soo islaamtay qof deggan Makka ha u sheegin, waxaan ka cabsanayaa inay ku dilaan”.
Waxaan ku iri, waxaan ku dhaaranayaa Allaha ay naftayda gacantiisa ku jirto inaanan joogi doonin Makka jeer aan ka tago masjidka Xaramka, si kor lehna aan ugu dhawaaqo dacwada xaqa ah iyadoo ay arkayaan gaallada qureysh. Rasuulka (scw) jawaab kama bixin, oo wuu aamusay.
Waxaan imid masjidka, iyadoo qureysh-na ay fadhido oo ay sheekaysanayaan. Dhexdooda intaan galay, ayaan codkayga kor ugu qaaday annigoo leh “jamaacada qureeshay, waxaan si dhab ah u qirayaa inuusan jirin Ilaah aan ka ahayn Allaha xaqa ah, waxaan kaloo si dhab ah u qirayaa inuu Muxammad yahay Adeegihii iyo Rasuulkii Alle”.
Hadalladaas markay si fiican u gaareen dhegihii qureesh hal mar ayeey si daran u fajacee, iyagoo aad u careysan ayaa waxay ka kaceen fadhiyadoodii, waxayna yiraahdeen “ha la qabto kan diintiisa ka gaaloobay”.
Xaggeyga ayeey soo aadeen, waxayna billaabeen inay i garaacayaan oo i dilayaan, jeer uu iga soo gaaro Cabbaas Binu Cabdil-Mudhalib oo Nebiga (scw) adeerkiis ahaa. Cabbaas ayaa isku kay daboolay, si uu ii badbaadiyo, dabadeedna wuxuu ku yiri “war ma waxaad dilaysaan nin reer qhifaar ah, iyadoo safaradiina ay maraan waddada ayn deggaan reer qhifaar, sidiina ayeey faraha iiga qaadeen.
Markaan soo miyirsaday, ayaa waxaan u imid Rasuulka (scw). Markii uu arkay Rasuulka (scw) dhaawaca i soo gaaray ayaa wuxuu yiri “soow kaama reebin inaad islaamkaaga shaacisid”. Waxaan iri, Rasuulkii Allow nafta ayaa sidaas doonaysay oo sidaas ayaan u sameeyay”.
Rasuulka (scw) ayaa igu yiri “waxaad aaddaa tolkaaga, waxaad uga sheekaysaa waxaad aragtay iyo waxaad maqashay, uguna yeer diinta Alle, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu Eebbe (sw) adiga kugu anfaco iyaga, markaasna iyaga dartood aad ajar u heshid.., hadday ku soo gaarto inaan (si fiican) u soo baxay ii kaalay anniga”.
Rasuulka (scw) si aad u fiican ayuu u soo dhoweyn jiray Abuu Dar. Ma dhicin inuu Rasuulka (scw) uu la kulmay Abuu Dar, markaasna uusann gacan qaadin oo uusan si farxad leh ugu muusoon. Markii uu Rasuulka (scw) geeriyooday, Abuu Dar wuu u adkeysan waayay inuu ku sii negaado magaallada Madiina, kadib markii magaalladaas uu ka dhintay sayidkeedii, ayna cidloobeen fadhiyadii cilmiga ee uu bixin jiray Xabiibka Rasuulka (scw). Wuxuu Abuu Dar u guuray miyiga Shaam,
Waxaa Abuu Dar loo soo bandhigay dhaldhalaalka adduunka iyo inuu xittaa madax ka noqdo Ciraaq oo wuu diiday, wuxuuna dadka aalaaba uga digi jiray inay ku kadsoomaan fidnada adduunka iyo in laga fogaado madaxtinimo-jaceylka.
La yaab malahan inuu sidaas Abuu Dar ku sifaysnaa, maxaa yeelay Rasuulka (scw) ayaa wuxuu horey u oggaa runta xeesha dheer iyo aragtida sawaabka badan ee uu xanbaarsanaa Abuu Dar. Sidaa darteed, wuxuu Suubbanaha Rasuulka (scw) kula dardaarmay Abuu Dar inuu badiyo dulqaadka faraha badan iyo samir badan.
Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Rasuulka (scw) weydiiyay Abuu Dar su’aal macnihiisu ahaa “Abuu Darow, kawaran haddaad gaartid madaxdii oo naftooda ugu tala galay hantidii qaniimada”.
Abuu Dar ayaa ku yiri Rasuulka (scw) “haddaba Allaha xaqa kugu soo saaray ayaan ku dhaartaye inaan seeftayda kaga shaqeenayo kuwaas”. Rasuulka (scw) ayaa haddaba siiyay Abuu Dar dardaarankan “ma ku tusaa wax ka kheyr badan taas?.., sabar oo dulqaado jeer aad igala kulantid”.
Abuu Dar si wacan ayuu u xasuusan jiray dardaarankaas uu siiyay macalinkiisii weynaa ee isaga wax baray, oo seeftiisa weligiis ulama bixin mid ka mid ah madaxda muslimiinta. Hase ahaatee, waxaa hubanti ah in uusan ka aamusin marnaba qaladaadkooda ay samaynayeen.
Maxaa yeelay wuxuu ogaa in ay furan tahay waddada wax-sheegga iyo nasteexada. Sidaan horey ugu sheegnay, maadaama aynan jirin qaladaad iyo khilaaf sidaas u sii weyn muddadii khilaafada Abuubakar iyo Cumar, laakiin muddadii khilaafada Cusmaan ayaa wuxuu Abuu Dar oo markaas joogay Shaam uu arkay inay muslimiintii si ba’an u qaabileen dhaldhalaalka adduunyada iyo iyagoo ku mashquulay raaxaysiga adduunyada, taasoo isaga ku qasabtay inuu si daran isu hortaago, dadkana ugu yeero ka foggaanshaha fidnada adduunyada.
Ugu Bishaareeya Kuwa Maalka
Kaydsada Kaawado Naareed
Goob kasta uu deggo, magaallo kasto uu galo iyo amiir kasta uu la kulmo wuxuu Abuu Dar oran jiray oraahdan uu ku caan baxsanaa.
“Ugu bishaareeya kuwa maalka kaydsada kaawado naareed,”
Isagoo ka soo qaatay hadalkaas aayaddii uu Alle ku lahaa “kuwa kaydsada dahabka iyo fiddada oo aan ku bixin waddada Alle ugu bishaareeya cadaab daran”. (suuradda Al-towbah 34).
Marka dadku ay meel dheer ka soo arkaan Abuu Dar waxay kula hortagi jireen oraahdan aan kor ku soo xusnay “kuwa kaydsada dahabka iyo fiddada oo aan ku bixin waddada Alle ugu bishaareeya cadaab daran”.
Madaxdii xukumaysay Shaam ayaa dhibsaday dhaqdhaqaaqa uu wado Abuu Dar. Mucaawiya Binu Abii Sufyaan oo xilligaas xukumayay Dimishiq iyo Abuu Dar ayaa waxaa dhex martay dood aad u kulul (ka aqri kutubta siirada ee ay qoreen culumada islaamka.
Qodobbadii uu Abuu Dar kala doodayay Mucaawiye ayaa ka mid ahaa guryihii uu ku lahaa Shaam iyo guriga uu ku lahaa Makka iyo halka uu ka helay hantidaas. “soow ma tihidiin dadkii joogay markii uu qur’aanka ku soo degayay Rasuulka (scw)” ayuu Abuu Dar weydiiyay su’aashaan xeyn saxaabo ahayd oo meel fadhiyay.
Isaga ayaa uga jawaabay su’aashoodii, oo wuxuu yiri “haa, waxaad tihiin dadkii uu qur’aanka soo deggay idinkoo nool, waxaadna kala qayb gasheen Rasuulka (scw) dagaallo badan”. Abuu Dar wuu sii waday hadalka, oo wuxuu yiri “war miyeydan aayaddan ku jirin qur’aanka”, isagoo aqriyayna aayaddan:
“Kuwa kaydsada dahabka iyo fiddada oo aan ku bixin waddada Alle ugu bishaareeya cadaab daran, maalinta lagu gubayo hantidaas naarta jahannamo ay ku guban wejiyadooda, dhinacyadooda iyo dhabarkooda, laguna oran kani waa waxaad u kaydsanayseen naftiina ee dhadhamiya waxaad kaydsanayseen ciqaabtiisa,” (Suuradda Al-towbah 34).
Allaha ka raalli noqdee Abuu Dar wuxuu ku tilmaaanaa zuhdi aad u weyn. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaa Abuu Dar gurigiisa soo galay nin, markaasuu ninkii isha mariyay gurigii Abuu Dar, mana uusan ku dhex arag gurigii wax alaabo ah oo yaalay.
Ninkii wuxuu Abuu Dar ku yiri: “Abuu Darow aaway alaabtiinii?!”.
Abuu Darr ayaa ku yiri “guri kale ayaa halkaa (aakhiro) ku leenahay, gurigaas ayaan alaabteena wanaagsan dhiganaa”.
Ninkii wuu fahmay ulajeeddada Abuu Dar, wuxuuna ku yiri “laakiin waxaa lagama maarmaan ah inaad guriga dhigatid alaab inta aad deggan tahay”.
Abuu Dar ayaa ku yiri “laakiin waxaad ogaataa in ninka iska leh guriga uusan marnaba nooga tagaynin guriga”.
Dardaarankii Rasuulka (scw)
ee Abuu Dar
Maalin ayaa intuu Abuu Dar fariistay yiri hadalladan “saaxiibkaygii aan jeclaa (waa Rasuulka s.c.w) ayaa wuxuu ii dardaarmay 7 waxyaabood.
Wuxuu I Faray Jaceylka Masaakiinta, Iyo Inaan Iyaga Ka Mid Noqdo
Wuxuu I Faray Inaan Eego Qofka Iga Hooseeya, oo Aanan eegin Qofka Iga Sareeya
Wuxuu I Faray Inaan Qofna Wax Weydiisan
Wuxuu I Faray Inaan Xiriiriyo Qaraabada
Wuxuu I Faray Inaan Ku Hadlo Xaqa, Haba Qaraaraadee
Wuxuu I Faray Inaan Alle Dartii Uga Cabsan Mid Canaanaya Canaantiisa
Iyo Inaan Badiyo Oraahda: ”Laa Xawla Wa Laa Quwata Illaa Billaah”